Home > Archive > WFF #8 Program Archive > S-Express
Programmers : Sanchai Chotirosseranee (Thailand), Py Leong (Singapore), Fransiska Prihadi (Indonesia), Thaid Dhi (Myanmar), Park Sungho (Cambodia), Tan Chui Mui (Malaysia), Oggs Cruz (The Philippines), Marcus Manh Cuong Vu (Vietnam) and Helene Ouvrard (Laos).
S-Express is an annual collaboration of short film programmers from eight countries (Thailand, Singapore, Indonesia, Myanmar, Cambodia, Malaysia, Philippines, Vietnam, Laos). This programmer is an insight into the development of filmmaking in the region. It aims to bring the selected films from each region to travel to their neighboring countries.
ရွေးချယ်တင်ဆက်သူများ (programmers) - Sanchai Chotirosseranee (ထိုင်း)၊ Py Leong (စင်ကာပူ)၊ Fransiska Prihadi (အင်ဒိုနီးရှား)၊ Thaid Dhi (မြန်မာ)၊ Park Sungho (ကမ္ဘောဒီးယား)၊ Tan Chui Mui (မလေးရှား)၊ Oggs Cruz (ဖိလစ်ပိုင်)၊ Marcus Manh Cuong Vu (ဗီယက်နမ်)၊ Helene Ouvrard (လာအို)။
S‐Express ဟာ နိုင်ငံ ၉ နိုင်ငံ (ထိုင်း၊ စင်ကာပူ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဗီယက်နမ်၊ လာအို) မှ ရုပ်ရှင်တို (short film) ရွေးချယ်တင်ဆက်သူတွေရဲ့ နှစ်ပတ်လည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကနေ ဒေသတွင်း ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစီက ရွေးချယ်ခံ ရုပ်ရှင်တွေကို အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဆီ ပို့ဆောင်ပေးဖို့လည်း ရည်ရွယ်ပါတယ်။